Mutsva mukwikwidzi weApple Music, Amazon Music Unlimited | Ndinobva mac
Mutsva mukwikwidzi weApple Music, Amazon Music Unlimited
Pazuva apo avo vane basa reApple Music yakanga yaita zvirevo umo vakafanotaura ramangwana rakajeka kwazvo rekushambadzira kwemimhanzi yeApple, hofori yeAmazon nhasi yatangawo chigadzirwa chitsva chiri mumakwikwi akananga kuApple Music.
Zviri pamusoro Amazon Music Unlimited, sevhisi yakazvimiririra iyo Amazon yaive nayo mumusika uye iyo inopa vashandisi mukana wekunyorera kuti vanakirwe kanokwana kagumi zvakapetwa nemazita kupfuura neiyo yapfuura sevhisi.
Sezvo wave uchikwanisa kuverenga mundima yekuvhura yechinyorwa chino, Amazon nhasi yatanga mutsva wekushambadzira mumhanzi unodarika iwo wavange vachitengesa kusvika nezuro uye mavaigona kunyorera vashandisi. tora uye teerera kuimba dzinopfuura miriyoni dzakasiyana.
Zvino ne Amazon Music Unlimited zvinhu zvinoshanduka uye nemitengo yemakwikwi kwazvo ivo vachapa vashandisi vakanyoreswa mukana wekutsvaga nziyo dzavanofarira mukatalog yevanopfuura nziyo mamiriyoni gumi. Mitengo yebasa idzva iri inotangira pamadhora 7 pamwedzi kune vashandisi vekutanga kusvika $ 9 yemaprimiyamu, Vanozviisa mumutengo mumwe chete uyo Apple Music, Spotify kana Google Play Music vari kupa.
Kana iwe uchida kuyedza sevhisi, Amazon inokupa iwe kwemazuva makumi matatu kuyedzwa mushure meizvozvo uchafanirwa kufunga nezve kuti uenderere mberi nekunyorera here kana ukasarudza kusahaya. Kune rimwe divi, isu zvakare tinofanirwa kukuzivisa iwe kuti Amazon iri kupawo chirongwa che $ 3 chevaya vese vashandisi vakatenga imwe yemanzwi mu "Echo" renji.
Raibhurari yeAmazon inosanganisira mazita kubva kuSony, Universal uye Warner zvinyorwa pamwe nemazana emazita akazvimirira. Amazon Music Unlimited yakatoburitswa muUS nhasi uye yakarongwa kuburitswa muUK, Germany neAustria gare gare gore rino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Mutsva mukwikwidzi weApple Music, Amazon Music Unlimited
Apple inoburitsa yechitatu beta yeWOSOS 3.1 yevagadziri
Maitiro ekuwana iwo mariridzo zvaunofarira nekhibhodi nzira